Sodana atsimo - ALinks
Lahatsoratra momba an'i Sodàna atsimo
Fantaro ny rafi-pampianarana any Sodana Atsimo!
Aprily 30, 2020 Karuna Chandna Sodàna Atsimo, fianarana
Ny rafitry ny fampianarana any Sudan atsimo dia nofaritana ho ambany ny vidiny. Izy io dia manana fahombiazana ambany nefa rafitra fitakiana be. Fandaharam-pirenena ', fananganana fanjakana ary fananganana fandriam-pahalemana. Ireo ezaka ireo dia manery mafy ny rafitry ny fampianarana. Mitombo, manapaka ny tsy fitoviana, ary ny
Ny rafitry ny fitaovam-pitaterana any Sudan atsimo
Febroary 18, 2020 Antika Kumari mandehana, Sodàna Atsimo
Ny fitaovan'ny rafitry ny fitaterana any Sodàna atsimo dia misy fomba efatra, izany hoe ny làlambe, ny lalamby, ny renirano ary ny fitaterana an'habakabaka izay fitaterana an-dàlana lehibe indrindra. Ny fidiran'i Sudan atsimo avy any amin'ny ranomasina dia ny alàlan'ny Mombasa any Kenya, izay ny ankamaroany no jerena
Febroary 13, 2020 Antika Kumari Sodàna Atsimo, Travel
Fotoana tsara indrindra hialana SUDAN SOUTH SUDAN Ny fotoana tsara indrindra hitrandrahana South Sudan dia ny volana Desambra ka hatramin'ny fiandohan'ny volana febroary. Zara raha hahita orana indray mitete ianao amin'ny fiandohan'ny taona, rehefa miposaka ny masoandro vao maraina be ary mafana - nefa tsy dia milay